ဓမ်မစာအုပျမြား ~ ထရေဝါဒ တို့တိုငျးပွညျ
10:52 PM ဓမ်မ စာအုပျမြား 16 comments
ဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားဆုံးဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံသည် သူ့ ကျွန်ဘ၀ နှစ်(၁၀၀)ခန့် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး သာသနာတော် လွန်စွာညှိုးနွမ်းလာခဲ့သည်။ ကျွန်ဘ၀မှ လွတ်မြောက်လာသည်နှင့် သာသနာနှစ်(၂၄၉၈)နှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့ကမ္ဘာအေးကုန်းမြေ မဟာပါသာဏလိုဏ်ဂူတွင် ဆဋ္ဌမအကြိမ် သင်္ဂါယနာတင်ပြီး သာသနာတော်ကို စောင့်ရှောက်ခဲ့ရသည်။
ပိဋ္ဋကတ်သုံးပုံ(၀င်း font လိုပါမည်)
မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ ဗုဒ္ဓ၀င်စာအုပ်တွေပါ၊ မြန်မာပြန်တွေ၊
ပြီးတော့ ဗုဒ္ဓ၀င်ကိုအင်္ဂလိပ်လို့ ဘာသာပြန်ထားတဲ့ စာအုပ်တွေ အားလုံးစုစုပေါင်း ၆၀ ရှိပါတယ်၊
ဗုဒ္ဓ၏ ဗုဒ္ဓဝါဒ (အရှင်ကောဝိဒ - ယော)
thantzaw2995 February 27, 2010 at 8:48 PM
အလွန် တန်ဖိုးရှိသော website ဖြစ်ပါသည်၊ လူတိုင်းအတွက် တန်ဖိုးရှိလှပါတယ်၊ download လုပ်ရတာလွယ် ကူသလောက် ebook တစ်အုပ်ဖြစ်လာရန် မလွယ်ပါ၊ မွန်မြတ်သော စိတ်စေတနာဖြစ်ပါတယ်၊
Soe Min October 26, 2010 at 10:06 PM
Appreciate the collections of ebooks. Suprise to see non-religious books collections! Please keep up.
THU YA December 30, 2010 at 11:12 AM
အခုလို စာအုပ်များကို စေတနာဖြင့် တင်ပေးထားသော ကုသိုလ်ကောင်းမှုကို အကြိမ်ကြိမ် သာဓုခေါ်ပါသည်။
phonemyatpaing December 8, 2011 at 9:41 PM
အလှူတကာ့အလှူတွင် တရားအလှူသည် အမြတ်ဆုံးဖြစ်သည့်အတွက် အလွန်မွန်မြတ်သန့်စင်သော အလှူတော်ကြီးကို ပေးနေသော သူတော်ကောင်းများ အမျိုးဘာသာ သာသနာအကျိုးကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ချမ်းချမ်းသာသာ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ..။
dan December 29, 2011 at 6:24 PM
အရှင်အာနန္ဒာမထေရ်မြတ်ကြီး ရဲ့ သမိုင်းကြောင်း စာအုပ် ဖတ်ချင်ပါတယ် ဘုရား
ဘယ်မှာ ဖတ်လို့ရနိုင်မလဲ ဘုရာ့
ဂျူဂျူမင်း February 11, 2012 at 7:58 PM
ထေရ၀ါဒ ဆရာတော် တစ်ပါးဖြစ်သည့် ဓမ္မစေ တီဆရာတော်ဂန္ဓမာ ပုံနှိပ်တိုက်ထုတ်- သံဃာဟုတ်မဟုတ် စစ်တမ်းကျမ်း အဲဒါလေးဖတ်ချင်ပါတယ် ရနိုင်မယ်ဆိုရင်ပို့ ပေးပါ
KoWinBoKo February 18, 2012 at 1:55 AM
ဦးဇင်းအတော့်ကို ကောင်းမွန်ပါတယ်ဘုရား သာဓု သာဓု သာဓု။
tunthuaung June 17, 2012 at 9:11 PM
ဦးဇင်း တပည့်တော် ဒို့မြန်မာ ဘယ်လဲ (၀ီရသူ)ကို ဒေါင်းလော့ လိုချင်လို့ပါဘုရား တပည့်တော် ယူလို့မရလို့ဘုရား ဘယ်လို ယူရမှတ်လဲ ဘုရား
တပည့်တော် မေးလ်က tunthuaung78@gmail.com
အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်...အရှင်မြတ်ဘုရားးး တပည့်တော်ကတော့ ဘာသာရေးစာပေတွေ နည်းပညာတွေ ကို ရှာဖွေတွေ့ ရှိသမျှ ပြန်လည် လက်ကမ်းမျှဝေနေတဲ့ ၀ါသနာရှင်တယောက်ပါ ဘုရားးး တပည့်တော် တစ်ခု တောင်းဆိုပါရစေဘုရားး ဓမ္မဒူတ တောကျောင်းဆရာတော် အရှင်ပညာဇောတ၏ စာအုပ်များမှ အမှတ်စဉ်(၅) ဒေါသဖြေဖျောက်နည်း၁၉၉၄ e-book လိုချင်လို့ပါအရှင်ဘုရားးး မိတ်ဆွေတယောက်က ဆိုဒ်မှာ လာရောက်တောင်းဆိုထားလိုပါ ဘုရားးး မျှဝေစေလိုပါတယ်... aungsan96@gmail.com ပါဘုရားးး.....
ဦးစားကြီး October 22, 2012 at 2:08 PM
ဗုဒ္ဓ ၏ ဗုဒ္ဓဝါဒ အရှင်ကောဝိဒ (ယော ) စာအုပ် ဖတ်လိုပါသည်ဘုရား။ ရနိုင်လျှင် တင်ပေးပါ။
သြှငျသာမိ - မုံရှာ October 29, 2012 at 12:43 PM
ဒကာတော် ဦးစားကြီး ဖတ်လိုတဲ့ စာအုပ် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် အဆင်မပြေပါက ပြန်လည်ပြောကြားပေးပါ။
ကိုတာ + _ လူငယ်တို့ရဲ့ အနာဂါတ်စကားဝိုင်းဂျာနယ်ကျော် ဦးချစ်မောင် _ သူ မောင်ဘိုသစ် _ ကဗျာရေးနည်း နိသျည်း
ဆရာတော်ဘုရား.....အထက်ပါစာအုပ်များကို တပည့်တော် ဒေါင်းလုတ်ဆွဲတာ မရလို့ လင့်အသစ်နဲ့ ပြန်တင်ပေးပါလို့ ရိုသေစွာလျှောက်ထားပါတယ်ဘုရား...
သြှငျသာမိ - မုံရှာ December 23, 2012 at 4:13 PM
တပည်တော် ပြန်လည် တင်ပေးပါမယ် ဘုရား
ywarthar July 14, 2013 at 9:56 PM
ဓမ္မပဒ အဋ္ဌကထာ မြန်မာပြန် တတိယတွဲ၊ စတုတ္တတွဲ၊ ပဉ္စမတွဲ တို့ကို pdf ဖိုင် ဒေါင်းလုပ် ရချင်ပါတယ် ဘုရား။
Unknown July 23, 2013 at 8:21 AM
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် စာအုပ်လေးလိုချင်လို့ပါခင်ဗျာ
ပေးထားတဲ့ link မှာမရှိတော့လို့ပါ။